प्रजु पन्त शनिबार, वैशाख २७, २०७७, १४:२५
काठमाडौं- राजधानीको न्युरोडस्थित झोछेँमा १५ वर्षदेखि साहित्यिक तथा गैरसाहित्यिक पुस्तक होलसेलमा बिक्री गर्दै आइरहेकी तारा चापागाईंलाई अहिलेजस्ताे महसुस कहिल्यै भएको थिएन। पसल सुरु गरेयता भूकम्पका बेला एक महिनाबाहेक लामो समय पसल बन्द गर्नुपरेको थिएन। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लागू गरिएकाे लकडाउनमा भने उनको पसल बन्द छ। उनको आँकलनमा अवस्था यही रहे पुस्तक व्यवसाय उठ्न १ वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
‘भूकम्पका बेला पनि बजार तंग्रिन समय लागेको थियो,’ चापागाईं भन्छिन्, ‘भूकम्पले त नेपाली बजारमात्रै प्रभाव पारेको थियो। यो विश्वमहामारीका कारण बाहिर पुस्तक आउन पनि समय लाग्ला। बजार उठ्न त ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग सक्छ ।’
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन विश्वरभर नै लकडाउन गरिएको छ। अर्थतन्त्र ठप्प छ। विकसित देशमा इ-बुकको बिक्री भने बढेको बताइएको छ। तर नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन। थुप्रै डटकमले केही प्रकाशनहरुको इ-बुकमार्फत् बेच्न थाले पनि त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डे लकडाउन खुलेपछि धेरैजसो पुस्तक पसलै बन्द हुने बताउँछन्। ‘लकडाउन कहिले खुल्छ पत्तो छैन,' पाण्डे भन्छन्, 'लकडाउन खुलेपछि ७५ प्रतिशत पुस्तक पसल भाडा तिर्न नसकेर बन्द हुनेछन् पुस्तक व्यवसाय तहसनहस हुनेछ ।’
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने, लोकसेवा आयोगको परीक्षा हुने भएका कारण कोर्षका पुस्तक बिक्री हुने बेला हो यो। लकडाउनले सबै परीक्षा र कक्षा सञ्चालन स्थगित भएका छन्। त्यसैले पाठ्यपुस्तक बेच्नेलाई उत्तिकै घाटा छ।
पाण्डेका अनुसार वर्सेनि नेपालमा झण्डै ४ अर्ब बराबरको पुस्तकको व्यापार हुन्छ। झण्डै ७५ प्रतिशत बजार पाठ्यपुस्तकले धान्छ भने बाँकी अनुसन्धानात्मक पुस्तक तथा साहित्यिक तथा गैरसाहित्यिक पुस्तकको हिस्सा हो। कक्षा सञ्चालन भएपछि पाठ्यपुस्तक बिक्री भए पनि लामो समय पसल खोल्न नपाउँदा भएको घाटा लामो समयसम्म रहने पाण्डेको बुझाइ छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पाठ्यपुस्तक छापिएको थियो। तर ती गोदाममा थन्किएका छन्। साहित्यिक तथा गैरसाहित्यिक पुस्तकको अवस्था पनि उस्तै थियो। बुकहिल पब्लिकेशनका भुपेन्द्र खड्काका अनुसार धेरै पुस्तक गोदाममा नै थन्किएका छन् भने सेड्युलमा भएका पुस्तकको प्रकाशन रोकिएको छ।
पाँचपोखरीका प्रकाशक राम श्रेष्ठ छापिने तयारीमा रहेका पुस्तक रोकिएकाे बताउँछन्। बजार पुर्‍याउन पुन: मुद्रण भएका पुस्तक पनि गोदाममा थन्किए। ‘यही पाराले पुरानै लयमा बजार फर्कन समय लाग्नेछ,’ श्रेष्ठले भने,‘न्यूनतम ६ महिना त नयाँ पुस्तक ल्याउन सकिन्न होला ।’
मञ्जरी प्रकाशन गृहका प्रकाशक कृष्ण अबिरल आर्थिक जोहो गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बेला पुस्तक किन्नेहरु कम हुने बताउँछन्। ‘यसै नै हाम्रो पठन अभ्यास कम छ,’अबिरल भन्छन्, ‘लकडाउनपछि पनि यो अवस्था सुध्रिने देख्दिनँ, बजार ध्वस्तै हुने भयो केही समय ।’
लकडाउनपछि पुस्तक व्यवसाय के होला ?
फाइन प्रिन्टका प्रकाशक अजित बराल र बुकहिलका प्रकाशक भुपेन्द्र खड्का लकडाउनपछि थोरै र राम्रा पुस्तक छापिने बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार मुद्रित किताबको संख्या पनि कम हुने देखिन्छ।
'आख्यानमा कथा, उपन्यास र कविता अब्बल छापिनेछन्,' भुपेन्द्रले भने,'कोरोनाको संक्रमणले थलिएका प्रकाशकले जो पायो, त्यही लेखकका किताब प्रकाशन गर्ने आँट गर्ने छैनन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि कमसल लेख्ने तर आफैं लगानी गरेर किताब छाप्ने लेखकको संख्यामा कमी आउनेछ ।'
आर्थिक स्थिति तंग्रिन समय लाग्ने भएकाले प्रकाशकले पनि पुस्तक प्रकाशनको संख्यामा कटौती गर्ने फाइनप्रिन्टका अजित बराल बताउँछन्। ‘बजार तंग्रीन गाह्रो हुन्छ । पाँच हजार छाप्छु भनेका पुस्तकहरु दुई हजार संख्यामा छापिएलान्’बराल भन्छन्,‘ एकदमै राम्रो त छैन तर छाप्दा नछाप्दा फरक नपर्ने पुस्तक नछापिन सक्छन् ।’
इ-बुक विकल्प बन्ला ?
विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नेहरु लकडाउनकै कारण घरमै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इ-बुकको विक्री बढेको देखिन्छ। धेरैजसो पुस्तक व्यवसायीले इ-बुकका लागि एप बनाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्। बुकहिलका भुपेन्द्र खड्का र फाइनप्रिन्टका अजित बरालले पनि त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको बताए।
नेपालमा केही समय पहिले इ-बुकको प्रचलन ल्याउन खोजे पनि असफल भएको बताउँछन् पाँचपोखरीका प्रकाशक राम श्रेष्ठ। ‘हामीले केही वर्ष अघि इ-बुक प्रचलन ल्याउन खोजेका थियौँ तर सफल भएन। हाम्रो पाठक इ-बुक पढ्न अभ्यस्त भएको देखिएन।'
समालोचक महेश पौड्याल नेपालीहरु इ-बुकमा खासै पोख्त नभएको बताउँछन्। ‘नेपालीहरु क्रेडिट कार्ड बोकेर इ-पे गरेर बुक पढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन,' पौड्याल भन्छन्,‘मेरै पुस्तक पनि अमेजनमा राखिएका छन् तर विदेशमा बसेका नेपालीले पनि इ-बुकभन्दा भौतिक नै पढ्दा रहेछन् ।’
फाइन प्रिन्टका प्रकाशक बराल भने लकडाउनले गर्दा नेपालीहरुले पनि इ-बुक पढ्ने बानी लागेको बताए। ‘म आफैँ पनि इ-बुक पढ्दिनथेँ तर अहिले विकल्प नभएकाले स्क्रिनमा पढ्ने बानी पारेँ अरुले पनि त्यस्तै गरेको भन्नुभएको छ,’बराल भन्छन्,‘सायद अब प्रिन्टेड किताबभन्दा इ-बुकको बजार राम्रो हुन सक्छ ।’
शिखा बुक्सका प्रकाशक पुष्पराज पौडेल इ-बुककाे कन्सेप्टमा जान ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। ‘प्रविधिमा सबै पोख्त हुँदैछन् अबको विकल्प भनेको इ-बुक नै हुन्छ होला,’पौडेल भन्छन्, ‘हामी पनि अब छिट्टै इ-बुककाे तयारीमा लाग्छौँ ।’
'थुप्रै' डटकमका सहसंस्थापक दीपेश आचार्यका अनुसार प्रकाशकसँग कुराकानी गरेर इ-बुकको संख्या बढाइएको छ। हाल दैनिक ५० देखि ६० वटासम्म पुस्तक बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए।
नेपालयकी प्रमुख कार्यकारी सैजना मास्केका अनुसार नेपालयबाट प्रकाशित केही पुस्तक इ-बुकमा राखिएको छ। सांग्रिला बुक्सका प्रकाशक मणि शर्माले पनि इ-बुककाे विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘सायद लकडाउनले नेपाली बजारलाई नयाँ मोडमा लिएर जानेछ, शर्माले भने,‘भौतिक किताबभन्दा इ-बुकको बजार बढ्नेछ।’
शिक्षक बन्न चाहनेको लाजमर्दो नतिजा : पढ्नमा भन्दा चोर्नमा ध्यान
कार्यकर्ता पोस्न स्वयंसेवक शिक्षक! विज्ञको प्रश्न- खोइ विपदमा शिक्षण योजना?
अन्धो कानुनले आँखा खोलिदियो [कथा] कविता कार्यक्रम सकिएपछि सबै उठेर नास्ताको टेबलतर्फ लागें। एक कप कालो कफी बोकेर एउटा गोलो टेबललाई घेरा लगाएर बसिरहेका चार कुर्सीमध्ये... शनिबार, असार १३, २०७७